Moa ve ny Tabilao Periodika fenoina ... na tsia?
Fanontaniana: Misy ireo singa tsy fantatra ve?
Ny singa fototra no tena fototry ny olana. Efa mba nanontany tena ve ianao raha misy singa tsy hita maso na fomba hitan'ny mpahay siansa vaovao? Ity ny valiny.
Valiny: Eny ary tsia ny valiny. Na dia misy singa mbola tsy noforonintsika na hita amin'ny natiora aza, dia efa fantantsika ny mety ho toetrany ary afaka maminavina ny fananany.
Ohatra, ny singa 125 dia tsy notandremana, fa rehefa izany, dia hiseho eo amin'ny laharana vaovao amin'ny latabatra fisehoana toy ny metaly teteza. Ny toerany sy ny fananany dia azo ambara fa ny tabilan'ny vanim-potoana dia mamorona singa mifanaraka amin'ny fitomboan'ny isa atomika. Noho izany, tsy misy 'lavaka' marina eo amin'ny latabatra.
Ampitahao amin'ny latabatry ny vanim-potoana nataon'i Mendeleev tany am-boalohany, izay nokarakarain'ny taratra araka ny fitombon'ny lanjany atomika . Tamin'izany fotoana izany, ny rafitry ny atoma dia tsy azo nazava tsara ary nisy ny lavaka marina teo amin'ny latabatra satria ny singa dia tsy voafaritra mazava toy ny ankehitriny.
Rehefa hita ny singa misy lanjan'ny atomika ambony (protons kokoa), matetika dia tsy ny singa mihitsy no hita, fa ny vokatra azo tsinontsinoavina, satria ireo singa tena ambony ireo dia tena tsy miorim-paka. Amin'izany lafiny izany, na dia ny singa vaovao aza dia tsy 'hita' mivantana. Amin'ny toe-javatra sasany, tsy ampy ny singa ao amin'ireo singa ireo dia novolavolaina mba hahafantarantsika ny singan'io singa io!
Na izany aza, ireo singa ireo dia heverina ho fantatra, voatonona ary voasoratra ao amin'ny latabatra. Noho izany, hisy singa vaovao hanampiana ny latabatra fisakafoanana , saingy ny toerana hipetrahany eo amin'ny latabatra dia efa fantatra. Tsy hisy singa vaovao eo amin'ny, ohatra, ny hydrogen sy ny helium, ny seaborgium ary ny bohrium.
Fotoam-pandrafetana ny fanadihadiana
Karazan-javatra vaovao hita
Ny fomba amam-pitaovana vaovao
Aiza no misy ny calcium hita ao amin'ny tabilao periodika?
Tontalin'ny lokon'ny periferika - ny atomika
Heatsin'ny latabatra fananganana
10 Silver facts - Element element
Fianakaviana voan'ny angovo
Ireo voambolana Oxoacid iombonana
Fampidirana ny Tontolon'ny Periodika
Angel Colors: Ilay Blue Light Ray, tarihin'ny arkanjely Michael
Tovolahy Mpianatra ao Chadron
Mankalaza ny fitsingerenan'ny Dr. Seuss amin'ny kilasinao
Fanokafana an'i Japon: Commodore Matthew C. Perry
Torohevitra mba hianarana amin'ny Map Quiz
Fahatakarana 4 karazana fanavakavahana samihafa
Ahoana ny hanoloana kamiao kamiao mirefy kamiao mirefotra
Film Blockbuster 6 ahitana mpilalao sarimihetsika "The Simpsons"
Fomba fianarana amin'ny fitsapana, fitsapana, na fanadinana
Ny fotoana lehibe indrindra amin'ny tantara ara-gymnastika olympika
Retrax Pickup kamiao bed cover Review
Babson College GPA, SAT sy ACT Data
'Rtoa. Dalloway 'Quotes
Fanolorana fanomezana ho an'ny mpankafy hatezerana
Ny vato masina: Ny mofomamy mofomamin'ny mpisorombe ao amin'ny Baiboly sy ny Torah
Ny lozam-pifamoivoizana any amin'ny Masters: Inona no ao amin'ny sakafo?
Ahoana no hampivelarana ny fahaiza-manaon'ny ESP sy ny saina?
13 antony mahatonga ny mpahay mpamosavy iray
Ady amin'ny Burgundian: Battle of Nancy